अमला खानुका यस्ता छन फाईदै फाईदा हेर्नुहोस् ! | Bharosha News
Home स्वास्थ्य अमला खानुका यस्ता छन फाईदै फाईदा हेर्नुहोस् !
अमला खानुका यस्ता छन फाईदै फाईदा हेर्नुहोस् !
काठमाडौँ । अमला अति स्वस्थकर फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ । अमला एक बहुगुणकारी फल हो ।
गर्मि मौससमा धेरै रसिलो फल हो अमला । रसिलो संगै यसले स्वास्थमा धेरै फाईदा पुर्याउछ । ल अमलाको फल खादा मात्र होइन यसको छहारीमा बसेर खादा समेत स्वास्थमा धेरै फाईदा पुग्छ ।
अमलाले युवाहरुमा यौबन शक्ति प्रदान गर्नुका साथै बृद्धहरुमा युवाअवस्थामा जस्तै जोस जाँगर प्रदान गर्छ । तर अमलालाई दिनहुँ सेवन गर्नु भने पर्छ । यसलाई सुख्खा चुर्णको रुपमा अन्य औषधिको रुपमा, अचारको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो एउटा सानो पतझर रुख हो।
अमलाको सुकेको धुलोमा हर्रो र बर्रोको धुलो बराबर मिसाई एकदुई चम्चा सुत्ने बेलामा खाँदा बिहान दिसा खु्ल्छ । सुकेको अमलाको चूर्ण नियमित रूपमा पानीसँग सेवन गर्दा आउँ, अपच र कब्जियतमा फाइदा गर्छ । दिनको दुईतीनवटा ताजा अमला खाने वा बिहान बेलुका खाना खानुअघि आधादेखि एक चम्चा सुकेको अमलाको चूर्ण खाँदा भोक लाग्छ ।
रगत बढी बग्ने समस्या जस्तैः नाथ्री फुट्ने, महिलाको रक्तप्रदर ९महिनावारीमा बढी रगत जाने०, अलकाईको रक्तश्राव आदि समस्यामा अमलाको सेवन बढी गर्दा रक्तश्राव हुने क्रम घट्छ ।
अमलायी रोग र समस्यामा अमलाले फाइदा गर्छ
मा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले कार्सिनोजेनिक सेल्सलाई बन्न रोक लगाउँछ जुन क्यान्सरबाट बचाउनका लागि फाइदाजनक मानिन्छ
जाडोमा अमला किन खाने जान्नुहोस
१ अमलामा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स लगायतका विभिन्न पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ । यसको नियमित सेवनले शरीरको सेल बढाउनुका साथै स्फूर्त पनि राख्छ ।
अझ महिलामा देखापर्ने विभिन्न शारीरिक समस्याबाट मुक्त राख्न अमलाले विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ । यसले विभिन्न इन्फेक्सनबाट पनि टाढै राख्छ । रक्त सञ्चालन गराउँछ र मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट पनि बचाउने गर्छ ।
२ अमलाले कपाललाई पनि निकै फाइदा पुर्याउँछ । यसले कपाललाई बाक्लो, कालो र चम्किलो बनाउँछ । यसले कपाललाई टुक्रनबाट रोक्छ । अमला खानुका साथै कपालमा कुटेर लगाउनाले पनि कपाल राम्रो हुन्छ ।
३ अमलामा पानीको मात्रा हुने भएकाले यसले पिसाबसम्बन्धी समस्या हटाउन मद्दत गर्छ । अमलाले अनावश्यक नून, एसिडलाई पनि पिसाबका माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने गर्छ । यसका कारण युरिक एसिड, मिर्गौलाका समस्या हटेर जान्छ ।
Previous articleललितपुरमा थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
Next articleकोरोना संक्रमणबाट थप ७ जनाको मृत्यु
पछील्लो २४ घण्टामा थप १ हजार १ सय ३३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त
काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप १ हजार १ सय ३३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण...
आफ्नो नाममा प्रदर्शन नगर्न कुलमान घिसिङको आग्रह
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नाममा प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आज एक विज्ञप्ति जारी...
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशमा १७ जना काेराेना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेज र भरतपुर अस्पताल चितवनकाे प्रयाेगशालामा चितवनमा...